पढाइ सकेपछि अष्ट्रेलियामा बस्न कुन भिसा लिने ? कसरी लिईन्छ भर्ना ? कुन कुन महिनामा खुल्छ भर्ना::Leading Nepal News
पढाइ सकेपछि अष्ट्रेलियामा बस्न कुन भिसा लिने ? कसरी लिईन्छ भर्ना ? कुन कुन महिनामा खुल्छ भर्ना
त्यसैगरी भोकेसनल शिक्षाका लागि खुलेका प्राइभेट कलेजले हरेक दुई महिनामा नयाँ भर्ना लिने गरेका छन् । यसरी भर्ना हुने विभिन्न महिना हुँदा पनि विद्यार्थीले प्रक्रिया शुरु गर्दा कम्तीमा ६ महिना अगाडिदेखि शुरु गर्नुपर्छ । पासपोर्ट बनाउने,आइएलटिएसको तयारी कक्षा पहिलेदेखि नै शुरु गदा उपयुक्त हुन्छ । पछिल्लो समय अष्ट्रेलियामा आवेदन दिनेको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ । यसरी विद्यार्थीको आवेदन संख्या बढ्नुको कारण धेरै छन् । यसको प्रमुख कारण अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये बहुसंख्यक विद्यार्थीहरुको सकरात्मक प्रतिक्रिया हो ।
अष्ट्रेलियामा शान्त र समृद्ध,उचित शैक्षिक वातावरण,गुणस्तरीय शिक्षा,वैज्ञानिक शिक्षण प्रणाली,पढाइसँगसँगै काम गर्न पाउने नियम,पीआर पाउने प्रवल सम्भावना,विवाहित भएमा दम्पत्ति नै जान पाउने सुविधा आदि कारणले अष्ट्रेलियामा पढ्न जानेको संख्या बढेको हो । नेपाली विद्यार्थीहरुको पनि अष्ट्रेलिया प्रमुख गन्तव्य बनिरहेको छ ।
शिक्षक लाइसेन्सका लागि आवेदन खुल्यो (हेर्नुहोस् विज्ञापनसहित)….
नेपाललाई विद्वानहरूको देश बनाउनुपर्छः ओली
अब त्रिविको ट्रान्सक्रिप्टमा अनुत्तिर्ण विषयको स्टार चिन्ह नहुने
कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन चैत ८ गतेदेखि खुल्ने !
अब सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने !
अस्ट्रेलिया पठाउने कन्सल्टेन्सीको ठगी धन्दा, सञ्चालकहरू फोन अफ गरेर बेपत्ता
परिक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ? यसरी पढे आउछ बढी अंक..